Minsiteran’ny Indostria : laharam-pahamehana ny orinasa ho an’ny Malagasy | NewsMada
Minsiteran’ny Indostria : laharam-pahamehana ny orinasa ho an’ny Malagasy
« Laharam-pahamehana ny orinasa mitondra tombontsoa ho an’ny Malagasy ». Io ny nambaran’ny minisitra vaovao, Randrianarisoa Guy Rivo, nandray ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, nisolo an’i Tazafy Armand. “Tsy ireo orinasa nakatona ihany ny tiany nambara fa izay orinasa malagasy rehetra, mba tsy ho ny vahiny ihany no manjaka”, hoy ny minisitra vaovao. “Vonona ny hanampy ny orinasa, mila misokatra ny fitondram-panjakana, mifandresy lahatra amin’ny mpandraharaha”, hoy ihany ny minisitra.
Saingy tokony ho orinasa afaka miatrika fifaninanana sy maharitra. Manome asa ho an’ny tanora, manodina ny vokatra eto an-toerana, mifameno amina sehatra hafa, mba hampahazo aina ny toekarem-pirenena. Tsy misy dikany, ohatra, raha misy vonona hampiasa vola, nefa tsy ampy ny famatsiana herinaratra sy ny fanamboaran-dalana, ary indrindra fa tsy azo antoka ny fandriampahalemana.
Mifamatotra hisian’ny tombontsoam-pirenena amin’ny fanaovana laharam-pahamehana ny orinasa rehetra ny fandoavan-ketra, hampitombo ny tahan’ny hetra miditra amin’ny fanjakana. Ny ady amin’ny kolikoly amin’ny endriny rehetra. Ary izay fidiran-ketra izay, tokony ho voaporofo amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, toy ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny hopitaly, ny sekoly, sns.
Hafatra nomen’ny minisitra vaovao ho an’ny sehatra tsy miankina rehetra ny hoe tsy azo atao ny manao ampihimamba. Raha ny heverina hanatanterahana ny fifidianana, fohy ihany ny fotoana hijanonan’ity governemanta ity fa ho hita eo ny tohiny…